“နိုင်ငံရေး ခရီးကြမ်းကို ဆက် လျှောက်ရ မယ့်မွေးနေ့ရှင်” သံမဏိ လိပ်ပြာ လေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်….. – Shwe Naung
N N | June 19, 2021 | Celebrity | No Comments
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက် ၇၆ နှစ် ပြည့်ပါပြီ။ ဒီနှစ် မွေးနေ့ ဟာ သူ့အတွက် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော်ကြာ အပြီးမှာ ပထမ အကြိမ် အထိန်းသိမ်း ခံဘဝနဲ့ ပြန်လည် ဖြတ်သန်းရတာပါ။
လူထုရွေး ကောက်တင် မြှောက်ပြီး နိုင်ငံကို လက်တွေ့ဦးဆောင် မှုပေးခဲ့တဲ့၊ ငါးနှစ်တာ နိုင်ငံရေးခရီးလမ်းကို နောက်တစ်ကြိမ် ရှေ့ မဆက်နိုင်ခင်မှာပဲ အာဏာ သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့၊
ရွေးကောက်ပွဲ တောင်ပြို ကမ်းပြိုအနိုင်ရ ပါတီ ခေါင်းဆောင်ဟာ အခုတော့ နိုင်ငံရေး ခယောင်းလမ်းကို ဆက်လျှောက် ရဖွယ်ရှိ နေပါတယ်။
အာဏာသာ မသိမ်းခဲ့ရင် ဒီအချိန်မှာ အတိုင်ပင် ခံပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် အစိုးရအဖွဲ့ နောက်သက်တမ်း တစ်ခုကို ဆက်လက်ဦး ဆောင်နိုင်မယ့် မွေးနေ့ ရှင်ဟာ အခု တော့ စစ်တပ်က တမှုပြီးတမှု ထပ်တိုးတရားစွဲ ဆိုနေတဲ့ ရာဇဝတ်မှု ပုဒ်မတွေကို ရင်ဆိုင် နေရတာပါ။
မွေးနေ့ရှင် ရဲ့ဆန္ဒ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ မွေးနေ့တွေကို ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်က တကူးတက မှတ်မှတ်ရရ ကျင်းပနေစရာမလိုဘဲ လူထုက အမြဲသတိတရနဲ့
ကျင်းပပေးခြင်း ခံရသူ တွေ ရှားရှားပါးပါးထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနဲ့သူ့ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
“မွေးနေ့ဆို တာတော့ တစ်နှစ်ပြီး သွားပြီပေါ့နော်၊ နှစ်တစ်နှစ်က ရွေ့လျား သွားပြီ၊ တစ်နှစ် တစ်နှစ် ရွေ့လျားသွားတဲ့ အချိန် အတွင်းမှာ ပြည်သူ တိုင်းပြည် သူတိုင်းက တစ်နှစ် အတွင်းမှာ ကိုယ်ဘာ တာဝန်ရှိတာ တွေလုပ်ခဲ့လဲ၊
ဘာတန်ဖိုးရှိတာ တွေလုပ်ခဲ့လဲ ဆိုတာ ပြန်သုံးသပ် ဖို့လိုတယ်၊ တန်ဖိုး ရှိတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် တင်မဟုတ်ဘူး၊ တခြားသူတွေအတွက်ပါပေါ့၊ အဲဒါလေး သုံးသပ်ပြီးတော့ နောင်နှစ်မှာ
ဒီနှစ်ထက်ပို ပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်မြောက် အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာ သံဓိဋ္ဌာန် လေးတွေ ချပေးစေချင်ပါတယ်၊ အဲဒါကပဲ အမေ့အတွက်မွေးနေ့ လက်ဆောင်ပေါ့”
ဒီစကားလုံးတွေကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်က ကျရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့ ၇၄ နှစ်မြောက် မွေးနေ့မှာ သူရချင်တဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင်အကြောင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့တာပါ။
အဲဒီနေ့ကဆို မနက် ၇ နာရီ မိနစ် ၄၀ မှာ ရန်ကုန်မြို့ လယ်က မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံ မှာ လူပေါင်း ၇၄၀ က နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ ရုပ်ပုံကို ဓာတ်ပုံကားချပ် တွေနဲ့ စုပေါင်းပုံဖော်ခဲ့ ကြတာက အထင်ကရပါ။
အခု ၂၀၂၁ ခုနှစ်မွေးနေ့မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ကိုချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေကိုခြံရံပြီး မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပဖို့ မဖြစ်နိုင်ပြန်ပါဘူး။ ခါတိုင်းနှစ်တွေနဲ့မတူတဲ့ ဒီနှစ်မွေးနေ့ ကတော့ ၁၀ နှစ်ကျော် ပြင်ပကမ္ဘာမှာ လွတ်မြောက် ပြီးတဲ့နောက် နောက်တဖန် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကာလမှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်နေတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၇၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် အတွင်းသူ့ ကိုချစ်တဲ့သူ အမြောက် အမြားကို ဘေးမှာခြံရံပြီး နောက်ဆုံးကျင်းပ ထားတဲ့ မွေးနေ့ဆို လည်း မမှားပါဘူး။
ဘာကြောင့် လဲဆိုရင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ ကျရောက် တဲ့မွေးနေ့တုန်းက ကိုဗစ်ကပ် ရောဂါကြောင့် လူစုလူ ဝေးမလုပ်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရက တင်းကျပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအချက် ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ကို ချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင် လိုက်နာခဲ့တာ ကြောင့်ပါ။ အဲဒီနှစ်ကသူ့ရဲ့ နေအိမ် မှာပဲအတူနေမိသားစုနဲ့ပဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
စစ်အုပ်စုရဲ့ အာဏာသိမ်းမှု နောက် ပုဒ်မတစ်ခု ပြီးတစ်ခုနဲ့ တရားစွဲဆို ခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေပြည်တော် နယ်မြေထဲက အိမ်တစ်အိမ်မှာ အကျယ်ချုပ် နေနေရပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင် တောင် ဘယ်နေရာမှာ ထိန်းသိမ်း ထားမှန်း မသိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီနှစ်မွေးနေ့ ကိုတော့ အကျယ်ချုပ် ကာလအတူနေ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သူ့ရဲ့ အချစ်တော် ခွေးလေး ထိုက်ချီ ဒိုတို့နဲ့အတူ ဖြတ်သန်းဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
အကျယ်ချုပ်ကာလ မွေးနေ့တွေကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းခဲ့လဲ ပကာသန တွေကို မကြိုက် တတ်သလို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်ရတာကို သဘောကျတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့
မွေးနေ့ ကို တခမ်းတနား ကျင်းပဖို့မ ဖြစ်နိုင်တဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ အပေါ် စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ယခင် အကျယ် ချုပ်ကာလတွေကို နှစ်အတန်ကြာ အတူဖြစ် သန်းခဲ့တဲ့ ဒေါ်ခင်ခင်းဝင်းက မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
အုန်းထမင်းကို ကြိုက်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့မွေးနေ့မှာ အုန်းထမင်းကို ဘုရား ကပ်သလို ကိုယ်တိုင် လည်း နှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက်စားတတ်သူပါ။
“သူက အုန်းထမင်းတောင် အဝင်း(ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း) ချက်တဲ့ အုန်းထမင်းမှ ကြိုက်တာ လို့ပြောတာ” လို့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းက ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့အပေါ် ဂုဏ်ယူ ဝမ်းသာတဲ့ဟန်နဲ့ ပြန်ပြောပြပါတယ်။
နေ့တိုင်း ဘုရားဝတ်ပြု တရားထိုင်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မွေးနေ့မှာ ထူးထူး ခြားခြား လုပ်ပေးဖို့ ပြောတာမရှိ ပေမယ့် ဘုရားစင်ကို အထူးပြင်ပေးရ တယ်လို့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
မုန့်လုံးရေပေါ်လို မုန့်လက်ကောက်လို မြန်မာမုန့် တွေကိုကြိုက်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့မွေးနေ့မှာ တော့ အဲဒီမုန့်တွေနဲ့ ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းလေ့ရှိပါတယ်။
ပန်းတွေရေချမ်းတွေ ဆွမ်းတွေ ပြင်ဆင် ပြီးလို့ မနက် ၈ နာရီလောက်ဆို သူဆွမ်းကပ်တယ်၊ ဘုရားရှိခိုးတယ်၊ ပြီးတော့မှ သူစားတယ်၊ အုန်းထမင်းကို မွေးနေ့မှာချက် ပေးထားရင် ရေခဲ သေတ္တာထဲ ဘူးလေးနဲ့
ထည့်ထားပြီး ခဏခဏ ပြန်နွှေးစားတာ လေးလုပ်တယ် ၊ ကိတ်မုန့်တွေ ဘာတွေ တော့ လုပ်လေ့မရှိဘူး” လို့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းက မှတ်မှတ်ရရ ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တွေကြိုက်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ရဲ့ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ကာလတွေမှာ စာဖတ်တာ၊စာရေးတာ၊ ရေဒီယိုနားထောင်တာ၊
ဘာသာစကားတွေလေ့လာတာ နဲ့ စန္ဒရားတီးတာ တွေကို အချိန်ဇယားနဲ့ အလုပ်လုပ် နေတတ်သူပါ။
နောက်ထပ် သူကြိုက်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုက ရုပ်ရှင် ကြည့်တာပါပဲ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် နိုင်ငံရေး ဇာတ်ကားတွေ အကြည့်များ သလို ဂန္ထဝင်မြောက်တဲ့ နိုင်ငံခြား ဇာတ်ကားတွေကိုလည်း စုဆောင်း ထားတတ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကြည့် တဲ့အခါ ဇာတ်လမ်း တင်မဟုတ်၊ဇာတ်ကား မှာပါတဲ့သရုပ်ဆောင် တွေရဲ့ အသေးစိတ် သရုပ်ဆောင် ချက်တွေက အစ လေးလေးနက်နက် ခံစားပြီး ကြည့်တတ် သူလို့ ဆိုပါတယ်။
“တခါသူ့မွေးနေ့မှာအတူကြည့်ဖြစ် တဲ့ရုပ်ရှင်ကနာမည် တော့မမှတ်မိဘူး။ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေများ တဲ့မြို့လေး ရှိတယ်၊ အဲဒီမြို့မှာလူတွေက တအားကိုကြောက်ပြီးတော့မှ မလွတ်မလပ် နေရတဲ့ အခါမှာ လူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။
အဲဒီလူက လွတ်မြောက်အောင်ကူညီတာပေါ့၊ အဲဒီလူရဲ့ အလုပ်တွေကို ကူညီတဲ့သူတွေကိုလည်း နှိပ်ကွပ် လွန်းလို့ ဘယ်သူမှ သူ့ကို မကူညီရဲဘူး၊ သူ့တစ်ယောက် တည်းပဲ စဉ်းစားပြီး ဦးဆောင် ပြီးလုပ်သွားတာ၊ နောက်ဆုံးအောင်မြင် သွားတယ်ပေါ့၊
အဲလိုအောင်မြင်တဲ့ အခါကျတော့ ပြည်သူ လူထုက သူ့ကိုတင် မြှောက်တော့ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူက လက်မခံဘူး၊ အဲဒီမြို့ကနေ ထွက်သွားတာပေါ့၊ ဇာတ်လမ်းက အဲဒီလို”
အကျယ်ချုပ်ကာလနှစ် အတန်ကြာအတူ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေမှာ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းတို့သားအမိက အနီးကပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
“အန်တီကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတာကတော့ အန်တီအကျယ်ချုပ်ကျနေကတည်း ကပေးချင်တာရယ်၊ နောက်မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို လက်မှုထည်တွေဖန်တီးနိုင်တာကို သိစေချင်တယ်၊ အဓိကကတော့ အန်တီ့ကိုချစ်လို့ပေးချင်လို့ကိုပေးတာပေါ့” လို့ မဖြူအိသိမ်းက ပီတိသံစွက်လို့ပြောပြပါတယ်။
စာဖတ်ရတာကြိုက်ပြီး စာအုပ်တွေနဲ့ ပျော်မွေ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အောက်စဖို့ဒ်ကအိမ်ထောင်ရှင် မဘဝမှာတုန်းက စည်းကမ်းကြီးတဲ့သူအဖြစ်ပဲ မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ ဒေါ်ကြည်ကြည်မေကဆိုပါတယ်။
“တခါတလေ မမစုဆီသွားလည်ရင် ကင်မ့် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သားအငယ်) ကို ကျောင်းကြိုတဲ့ အချိန်ဆို အတူသွားကြတာပေါ့။ လမ်းမှာလည်း ကောင်းကျိုးဖြစ်တဲ့ စကားပဲပြောတတ်တယ်၊ သူများအကြောင်းလည်း မမစုကမပြောတတ်ဘူး။
ကျောင်းကြိုပြီးအိမ်ရောက်ရင်လည်း ကင်မ်က သူများကလေး တွေလို ဆော့တာ တီဗီ ကြည့်တာမလုပ်ရဘူး၊ အိမ်စာကိုတန်းလုပ်ရတာ။ မမစုက အမြဲတမ်းစည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ တိတိကျကျ နေတတ်တယ်” လို့သူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျင့်တွေကိုပြန်ပြောပြပါတယ်။
အကျယ်ချုပ် ကာလအလွန် တချိန်က မွေးနေ့တွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည် နေအိမ် အကျယ်ချုပ်လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက် လူထုနဲ့ ပထမဆုံးကျင်းပခွင့်ရခဲ့တဲ့မွေးနေ့ကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ကျရောက်တဲ့ ၆၆ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါ။
လူထောင်ချီ တက်ရောက်တဲ့ အဲဒီမွေးနေ့ကို ရန်ကုန်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ရုံးမှာကျင်းပခဲ့တာပါ။ အဲဒီမွေးနေ့ မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကအမျိုးသားရ င်ကြားစေ့ရေးမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းဖြစ်လို့ သူ့ရဲ့ ဆုတောင်းက အားလုံးငြိမ်းချမ်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်အောက် စစ်တပ်နဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကေအိုင်အိုတို့ အကြားတကျော့ ပြန်တိုက်ပွဲ တွေစတင်ဖြစ်ပွားနေချိန်ပါ။
တချိန်တည်းမှာပဲ ကေအိုင်အေဌာနချုပ်ရှိတဲ့ လိုင်ဇာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ပွဲကို ကေအိုင်အေ အရာရှိကြီးတွေ ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပပေးခဲ့တာပါ။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ၆၇ နှစ်မြောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့ကိုတော့ နိုင်ငံတဝန်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လန်ဒန်ကိုရောက်နေပါတယ်။
အဲဒီနေ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လန်ဒန်က ဘီဘီစီ ကမ္ဘာတလွှားအသံ လွှင့်ဌာန ကိုရောက်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ယာပြန်ရသလို နွေးထွေးကြောင်း ပြောခဲ့ ပါသေးတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ၆၈ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကတော့ ရန်ကုန် ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီရုံးချုပ်မှာ ပဲကျင်းပပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖွဲ့ချုပ်ရုံး လာမယ်ဆိုတိုင်း လူစည်ကားတတ်ပေမယ့် အဲဒီနေ့ ကတော့ ထောင်ချီတဲ့လူ အုပ်ကြီးက ဆီးကြိုနေခဲ့တာပါ။
အထင်ကရ အဖြစ်ဆုံးကတော့ အဲဒီမွေးနေ့မှာ သတင်းစာဆရာ ကြီးဦးဝင်းတင်ပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့အတူရှိ နေခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၄ မှာကျရောက်တဲ့ ၆၉ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုလည်း အဖွဲ့ချုပ်ရုံး အပါအဝင် နိုင်ငံတဝန်းကျင်းပကြပါတယ်။
အဲဒီနှစ်မှာ ထူးခြားတာ တခုကတော့ နော်ဝေးနိုင်ငံဖရိုလန်မြို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပန်းခြံအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၇၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုတော့
အစိုးရတာဝန်တွေကို နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ အဖြစ်ထမ်းဆောင်နေပေမယ့် လွှတ်တော် ဝန်းထဲက I 12 အဆောင်မှာ ပဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈ခုနှစ် ၇၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကတော့ ဘုရားတည်ခဲ့ပါတယ်။ နေပြည်တော်က ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး စေတီတော် မူလဌာပနာပိတ်ပွဲ ကျင်းပခဲ့တာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ သာယာဝ ပြောရေးရည်စူးပြီး ပတ္တမြားတပြည်၊မြတပြည်၊ကျောက်စိမ်းတပြည်နဲ့နီလာတပြည်စီလှုခဲ့တာပါ။
ပြီးတော့ အဲဒီနေ့မှာပဲ လွှတ်တော်ထဲက I 12 အဆောင်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ချိုးဖြူငှက် ၇ကောင်ကိုလွှတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့
ဒီမိုကရေစီ အရေးတွေ့ဆုံ ဆွေး နွေးဖူးတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုပိုင်ရဲသူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ရိုက်ပုတ် မှုဒဏ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့
အတူမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံး က ခံနေရချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အသက်ရာကျော် အထိ ရှင်သန်စေချင်သလို့ သူ့ရဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ အချိန်တွေကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်း သွားစေချင် တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“အန်တီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီနှစ်မွေးနေ့ ကိုတော့ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့တော့ ဆုမတောင်းချင်ဘူး။ သူကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းချင်တယ်” မြန်မာမှာနေထိုင်တဲ့ နှစ်သုံး ဆယ်ကျော်မှာ ထက်ဝက် ကျော်ကာလတွေက အကျယ်ချုပ်ဘဝ၊
ထိန်းသိမ်းခံဘဝနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သြဇာအရှိန် အဝါကတော့ မြန်မာလူထုအပေါ်မှာ ဆက်ရှိ နေဆဲပါ။ လူထုခေါင်းဆောင်အတွက် အရင် အကျယ်ချိန် ကာလတွေနဲ့မတူတာက ဆယ်စု နှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်တဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု ပုဒ်မ၊
နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက် ဥပဒေလို ပုဒ်မ တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီက တရားစွဲဆိုထားတာကြောင့် ဒီတစ်ခေါက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြတ်သန်း ရမယ့် နိုင်ငံရေး ခရီးလမ်းဟာ အရင် နဝတ၊ နအဖ စစ်အစိုးရ တွေလက်ထက် အခြေအနေ ကထက် ပိုပြီး ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမယ်လို့လည်း သုံးသပ်မှု တွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒီအခြေအနေကို ရင်ဆိုင် နေရတဲ့ မွေးနေ့ ရှင်ရဲ့ သားငယ် ကင်မ်ကတော့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူ မိခင်ဖြစ်သူ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေကြားမှာ အကောင်းဆုံး မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ လို့ဆု တောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
အခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၇၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို သူ့ကိုချစ်တဲ့ နိုင်ငံတဝန်းနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းက ပြည်သူ တွေကတော့ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ကျင်းပပေးကြဦးမှာပါ။
ကျင်းပဖို့ လည်းကြိုပြင်နေကြပါပြီ။ အဲဒီလို မွေးနေ့ပြင်ဆင်ပေးနေမှုတွေကို နေအိမ် အကျယ်ချုပ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည်သိရှိခဲ့ပြီး သူ့ရှေ့နေ ဒေါ်မင်းမင်းစိုးက နေတစ်ဆင့် ခုလို သတင်းစကားမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။
“ပြည်သူတွေကတော့ အမြဲအဲဒီ လိုပါပဲ။ ဒီလိုစီစဉ် ပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်”
အလန်းစား ဖက်ရှင်နှင့် ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှပနေတဲ့ နန်းမွေစံ…
သဇင်ဦးရဲ့ အကြမ်းစား ပုံရိပ်လေးများ…..
မထင်မှတ် ထားလောက်အောင် ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်ပါမည်ဟု သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးနှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ အကြောင်း MWD မှ ကြေငြာကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်….
ပရိတ်သက်ကို ချစ်သူ ကောင်လေးရဲ့ ပုံရိပ် ကိုယ်တိုင် ပုံတူရေးဆွဲကာ ပြောပြလာတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး….
ပိုစ့်ပေးကြမ်း တဲ့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသ တွေကို ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် လွန်းတဲ့ မြစမ်းသီတာ…..